निरक्षर रम्भापानी – Lok Raj Pathak
यत्रो हुल छ; वरिपरीबाट सबैले घेरिंदा पनि खै त म कसैसंग गफ गर्न सकिरहेको छैन । एक्लै भन्नु कि जमात्, उफ ! धन्य भगवान एउटा मन दिएछौ । प्रकृतिलाई पनि आभार प्रकट गर्छु । यी आँखाले चियाउँने छिंडी र पाँसुलाले टेकिने अखेटो भेटेछन् नत्र ……।
मनका यति विघ्न कलकलाउँदा रहरहरु ऊ त्यो डाँडो नभए कति पर पुग्दा हुन् । यतापट्टि अल्ली खुल्ला चउर तर सूर्य त्यतैबाट खसेछ, नजर फिराउँनै मुस्किल । माथि पुग्न त ठाउँमै जन्मनुपर्ने …. हेर्न पनि कत्रो सकस् । भूंईकुहिरो संधै आफैभित्र गजधम्म गुम्सिंदो छ । असाध्य रोग क्यान्सर पनि निर्मूलै हुने भो तर यो गुम्स्याई त न बिष्फोट हुन्छ न निष्कृय । ठिकै छ झर्झराउँदा आकांक्षाहरु बाहिर च्यूलिएर लुछिनुभन्दा बरु भित्रै तीनपाते बनुन् । एकपटक कसो अग्रख नपलाउला र !
जुनेली रातको चकमन्नतामा बस्ती निदाईरहेको छ । बुहारी, बूढाखाडा र भाले कुखुराहरु भर्खरै गुँडमा गुड्गुडाऊदै गरेका परेवालाई साथ दिदैछन् । शरीरभरीका कपडा र मुख वरिपरि बतासले छाम्दैछ । किन छाम्नु पर्‍यो अब त छिप्पिएको काँक्रो जस्तो भैसकेको छ अनुहार । बिस्तारै हिड्नु पर्ने हो तर पदचापहरु बारीका डिल, सडक, किनार र पाखाहरुमा तलमाथि गरिरहंदा चकमन्नता चिरिएको गुन्जन पर–परसम्म झाँङ्गिएको हुनुपर्छ । अध्यारोको साथी सर्तकता नत्र जीवनदेखिनै हात धुनुपर्छ ।
मन काटीकुटी बनेर जोड घटाऊ बिचार्दैछ । एकोहोरो पद्चापको पुनरोक्ति मात्र । आँखाले कानका इशाराहरु मार्फत मुहारामा अनौठा रेखाहरु कोरिरेहका छन् एकनासले । मिर्मिरेको स्निग्धतामा दिमागी हालत भने अझै गमिलो बनेर प्रकृतिसंग सान्निध्यता जचाउँन मानव यन्त्रलाई चालकको अभिनय गर्दैछ । रातभरि पनि न उडुसले फुर्सद पाए न म झिम्किन सकें । ‘उसै त मुसुरी, हिङ्ले झानेकी’ भनेजस्तै घरी आफू सम्झ्यो, घरी जन्मथलो, घरी त्यो बालापन र अबोध क्रीडास्थलको अभिनय…. । जे गरेपनि आफ्नै देशको मुखौडा किन झुल्किँदो हो ? अझै बाबुआमा बिर्सेर त्यो नक्कली किन स्वाङ् पार्न तम्सिन्छे कुन्नी । निदकी काल ।
“एका बिहानै हिडेको, एकछिन बिसाउने हो की …….”
न भारी, न थकान न कुनै उपलब्धि, न त कुनै समय सिमारेखा । उठ्यो, हिड्यो, बिसायो, फेरि ………… ।
“‘अँ यता त्यस्तो केही रहेनछ ।”
फेरि बोलें– “किन केही हुनु पर्‍यो र ? न आत्तिऊ भैहाल्ला नि । कहिले खाली हात फर्केका छौ र ।”
“ए भगवान केही नहोस्, बरु………..”
“बरु के ?”
होइन !!!, केही होइन । (जवाफ मिलेन)
सोचें– छि ! यसरी पनि देश दर्शन हुदोरहेछ ! म त कुन्नी किन देशको यस्तो मुहार हेर्न पाउनु भाग्य ठान्छु । वर्तमानमा नियति ।
“आफू पस्ने खाल्टो आफै खनेको जस्तो ।”
यसपछि कतै कुनै आकृति दिमागमा छिरे त हुन्थ्यो । शिसिपसको जस्तो झर्ने यात्रा ।
“हैन, हैन अब धेरै खट्नु नपर्ला ।”
मनले बात मार्न खोज्यो–
सोचको किटानी जवाफ–
धाने पो खट्न सक्नु, यस्तै हो भने त प्रलय हुन्छ ।
“खै बल्ल रात परेको जस्तो पो लागिरहेछ ।”
कस्तो आत्तिएको – “यो तेश्रो प्रहर हो ।” ऊ हेर त पूर्वबाट…। मन थाम्नुपर्छ नि । के यो अँध्यारोले तिमीलाई मात्र अधकल्चो बनाएको छ र । आगो छोपेर धेरै टिकिदैन बरु धुवाँ त रामायणमा पनि आकाशै ताकेथ्यो ।
– “अहिले त ज्वाला पनि भासिंदै छ ।
यो राम्रो होइन ।”
– तर सहनुपर्छ । यो देशमा जन्मेपछि यत्ति पनि गर्न नसके के नालापानी र काँगडाका गीत गाउनु ।
– “आफैलाई जलाए ज्योति निस्कन्छ कि बरु ।”
हैन विवेकलाई अझै पालो दिऊँ । रौद्र बन्नु अभिशाप हुनेछ ।
गति उही, हिंडाई त्यही पाराको, डाँडो मध्ये नेपालको मनपर्ने पाल्पा । अलि परैबाट आफ्नो रफ्तार धान्दै स्व–अनुशासनको घेरा भित्रबाट एक शुभचिन्तक बोले–“सर आज किन चुपचाप।”
पानी माथि ओभानो बनें –“होइन एकाबिहानै के पर्पर् गर्नु भनेर ।
घाँटीमा आएको अर्को वाक्य निदर्यी बनेर अचेंटी दिएँ ।
– रहरहरु सबै ओथारो बसेछन ।”
उनी शारिरीक रुपमा आफैमा व्यस्त छन् । मात्र आवाजका साथी । फेरि मलाई उछिने – “यी कुराहरु लेख्ने हो भने मीठो साहित्य बन्छ होला ।”
“खै कुन्नी………” !
मैले सोचेथें, उसको बोलाईले मलाई नठुङ्गेको भान परोस् । अहँ त्यसो भएन ।
“सर ! मलाई पनि लेख्ने मन छ तर ………………”
“लेख न, भैहाल्छ नि ! के को तर……,
कि आँटले खान्छ कि ढाँटले । अलिकति ज्ञान भए पुगिहाल्छ । ”
ह्वास्स बारुदसंगै डढेको गाउँ र माटो बनेका मान्छेहरु नाकको पोरा छिचोले । बिचारें – यो त उधुमको मान्छे रहेछ । खै के लेख्छ होला यस्ले ? भेलमा हेलिने भयो यो पनि ।
“मैले सरको लेख पढेको थिएँ । कस्तो मेरै कथा जस्तो । आजभोलि त भेटेको छैन । सरले कतै ………।”
“अँ मैले छाडिदिएँ ।”
“आजभन्दा दश वर्ष अघि मेरो साहित्यको पाठेघरै खस्यो । त्यसपछि मन बुझाएँ ।”
“अब कुनै जन्मिदैन त ?”
“खै भन्न सकिदैन । परिवर्तनले रित्याएको खोक्रे जिन्दगी भरिएछ भने त हो, संभावना न्यून छ।”
अब चाँही कुराको बिट मर्छ होला । त्यसो भएन । उसले पुनः म तिरै घाँटी तन्काएर मलाई खल्बलाई रहने जोहो रच्यो ।
– “साँच्ची साहित्य भनेको के हो ? यो कस्तो हुन्छ ? कसरी लेख्नुपर्छ ? के मैले पनि लेख्न सक्छु त सर ? भनिदिनु न ।” मैले हारें ।
“तिमीले हिमालदेखि तराईसम्म ओल्टाई–पल्टाई गर र भेटेका कुराहरु जानेको भाषामा जस्ताको तस्तै लेख । त्यही हो साहित्य । तिमी खोलासँग जिस्किऊ, झरनासँग छिल्लिऊ अनि कलमलाई सोध त उसले आफै बक्न थाल्छ तर गहिरो तलाउ र बेगवान नदीमा झ्वाम्म हाम नफाल्नु । जब तिमी निपूर्ण हुन्छौ त्यसपछि सुगम पारामा त्यसमा पनि तैरिएर पार लाग्न सक्नेछौ । साहित्य एउटा सिप पनि हो ।”
“ए ! हो र सर ।”
चुहिन लागेको बादलझैं धुम्मियो ऊ । शायद मडारिएको हुनुपर्छ मेरो सहयात्री ।
फेरि हेरें – वाफ रे वाफ उसका आँखा ! एउटा सुनामी सन्सनाएको देखें ऊ भित्र । ठिकै छ, अब ऊ घनघोर भएर मल्याक्मिलिक् गर्दै दर्कीनेछ । “ए भगवान ! उसको सिर्जनाको आँधिबेहरीले सगरदेखि सागरसम्म सोत्तर पारोस् ।”
मेरो अगाडि छ ऊ । पथप्रदर्शक वा संरक्षक जे पनि भन्न सक्छु म । उस्तै परे मेरो कालसंग जुध्न पनि पछि पर्दैन । त्यसैले देउताको स्थानमा पुर्‍याउन मन छ । कहाँ थियो थाहा थिएन । त, उसले र मैले एउटै घाम ताप्थ्यौं । उमेर एउटै हो तथापि सर भन्छ ।
उत्तिकै सरल छ र सफा छ स्निग्ध हिमाल जस्तो । म चाहन्थें ऊ मबाट अरु नै केही मागोस् तर किन आफू अघाई सकेको साहित्य माग्छ ऊ । भैहाल्यो म जानेको दिन्छु तर गुरु बन्दिन । ऊ भित्रको एउटा मानवलाई ब्युँझाई दिएर छाड्छु अब म ।
“फेरि चौतारो आइपुग्यो ।”
“ल ठीक छ मिलेर बसौं । अब त पुरै उज्यालो भयो अझ चनाखो भएर पाईलाहरु ………… ।”
“आज कता जाने ?” जवाफ दिनुपर्नेले सोध्यो ।
“जान बाँकी कहाँ छ र ! ल ठीक छ आज पूर्वी पाल्पा जानुपर्छ।”
उता पिपलको बोटमुनीको बहस कानमा ठोक्कियो–कोही हाँस्दै, कोही गफमा ब्यस्त, पल्लो कुनो हाहा.. हिहि.. मा डुबेको । आँखा सबैका चनाखा । सलाईका बट्टाजस्ता घरहरु, आडैका परालका टौवा, कपनीहरु बाँकी भएका कोदोबारी यस्तैमा आँखा डुलिरहेछन् । ओठ भने शान्त ।
सहयात्री आडैमा आएर बस्यो । मलाई पढ्यो र मेरै अनुशरण गर्न लाग्यो ।
मनले दिक्क मान्यो – “तिमी म जस्तो नबन्नु….प्राकृतिक विध्वंश, मानवीय विनाश र विराट् अनुरागले तिमीलाई घाइते बनाउला।”
उ त साहित्य खोजिरहेछ । घरी मलाई हेर्छ । घरी मेरा निशानाहरु ।
लम्पसार पल्टिएका विशाल फाँटहरु अन्नजति खन्चुवा मान्छेलाई बुझाएर बच्चाविहीन आमाका काख जस्ता छन्, सिक्रिक्क सुकेका रुखहरु पातविहीन बन्दै छन् । घना जंगलहरु बिरामीले कपाल फेर्न लागेझैं सकिएर पहिरो गएको खर्क जस्तो बनिरहेछन् । हिमालका काखहरु हिऊँ ओढेर खुम्चिंदै छन् । टाढा नजर डुलाउँदा निसास्सिएर नजिकै नजर झुकाउँदा शीत नुहाउने दूबो र वर–पिपलका पातहरु आङ्भरी तुसारो बोकेर नियतीको टिप्पणी गर्दैछन्…..। हत्तेरिका यस्तो बेलामा कस्तो सिर्जनाको फूलबारी भेट्टाउला उसले ?
“ए तिमीले यी डाडाँकाँडामा कुनै सिर्जना देख्यौ त ? खै मलाई बताउ त ?”
“अँ सर…….!”, ऊ हिच्किचायो ।
“साहस गर, आफूलाई पर्दा भित्र राख्यौ भने सिर्जना भाग्छे । उसलाई त फकाउनु पर्छ । लाडप्यार दिनुपर्छ तर पुल्पुल्याउनु हुँदैन । आडैमा पनि राख्नुहुन्न र धेरै टाढा पनि जान दिनुहुँदैन । आफै विचार है।
ऊ लल्याक्लुलुक् भयो । धन्न आफूलाई मेरो आशय बमोजिम रुपान्तरण गर्न तम्सियो ।
“सर मैले मेरो नजरभरि अनन्त वैभव, सौन्दर्य र ऐश्वर्य भेटेको छु ।”
“जस्तै.. ! ………….”
“हेर्नु न सर, त्यो हिमाल अघि भन्दा अहिले कति सुनौलो बन्दै छ । त्यसैको परावर्तनले हामीलाई पनि तेज प्रदान गर्दैछ । त्यहाँबाट बगेको अमृतमय पानी पहाडलाई सिंचदै विशाल महासागरको यात्रामा छङ्छङ्गाउँदै छ । आहा ! ऊ त्यो पहाड मेरो जन्मस्थान । त्यहाँ मेरा बुवा–आमा र दिदीहरु खेती थन्क्याएर अनदी र मार्सीधान कुट्दै ढिकी जाँतोमा मेरो बाटो हेर्दैछन् । केही समयपछि ती रुख हरिया हुनेछन् र चराहरु गुँड लगाएर दिनका हरेक प्रहरमा चिरिबिरी गर्नेछन् । बारीका डल्ला उचालेर निस्केका मकैका दिउला धानचमरामा फूल्नेछन् । त्यसैलाई थाँक्रो बनाएर सिमी र बोडीहरु लटरम्म फल्नेछन् । उ त्यो बेंसीको फाँटमा त असारे गीत गाउँदै खेतारीहरुसंग हिलो छयाप्दै छु म । दिनभरी बाउसे बनेर छेड हान्दै यही चौपारोमा यसरी नै झम्के साँझमा बिसाई मेटिरहेछ अहिले मेरो सोचले ।”
अहो ! कस्तो अचम्भीत भएँ म । यो मान्छे त आशावादी त्यो पनि प्रकृतिप्रेमी र स्वच्छन्दतावादी धारमा पो बग्ने भयो त । कठै ! देवकोटा, हरे गोपाल प्रसाद रिमाल ! धन्य मोतिराम ! विचरा भानुभक्त !
“ल ठीक छ ! अब हिड्नुपर्छ ।”
“सर कस्तो छ मेरो साहित्य ?”
मैले उसलाई हेरेर अगाडिका दाँत देखाएँ । उसले शीर झूकायो । बोलचाल भएन ।
त्यस्तो बुच्चो पनामा पनि यति भेट्नेले सफा पाना केरकारै गरेपनि बात लाग्नेछैन । म सोच्दै थिएँ उसलाई कसरी लेखाउने भनेर ।
“ल ठीक छ । अब तिमीले यी कुराहरुलाई लेख्नुपर्छ । तिम्रो सोचमा अझै धेरै फूलहरु रोप, उमार र गोड त्यसपछि एक छेउबाट सिलसिला मिलाएर फूलबारी सजाऊ । अनि घरको बरण्डाबाट त्यो फूलबारी नियाल । अरुले आहा भनून् तर तिमी अझै तल्लीन बन, पानी छर्किरहु, मौसम अनुसारका नयाँ बोटहरु सार्दै जाउ । पछि नफर्क तर विगतबाट पाठ सिकेर आफ्नो बगैंचालाई नितान्त आफ्नो सोच र मनोकांक्षा अनुसार अविचलीत बनायौं भने राम्रो हुनेछ ।”
“हस् ! म प्रयास गर्नेछु ।”
यत्ति बोल्यो ऊ । म पनि खुशी भएँ । बोलेर भन्दा गरेर देखाओस ।
सदरमुकामबाट नाप्न थालेको बाटो यत्तिबेर केही कोष छिचलिएछ । अँध्यारोमै रमाईलो डाँडो, मनपर्दो सेतो ताल माडी र लोभलाग्दा हरिया पखेराहरु उछिनिएछन् । साथीहरुले सोध्दा म भन्ने गर्थें –“बनभोज खान ग’को थें ।” उषाले मुख पखाल्न नपाउँदै जिब्रो लर्बराउन थाल्यो । गाउँले होटल ताकेर बिश्राम लिइयो । सार्वजनिक स्थानमा गुन्द्री ओछ्याएर घाम ओड्दै बिस्कुट र तातोपानी चापेपछि फेरि पूर्व ताकेर लुखुर–लुखुर गर्ने काम दोहोरियो । शङ्काका पहाडहरु मृत्युका बादलले छोपिएर धुमिल प्रकाशमा शीत लुकेझैं जीवन कोपर्न तल्लीन देखिरहेछु । मन भित्रका आकांक्षाहरु टमक्क बुझो लगाएर मात्र बाँच्ने संघर्षका लागि तन, मन, धन केन्द्रित छ । मृत्युपछि त सबै रित्तै पो हुन्छ त ।
“कठै, मान्छे ! बटुवाको कत्रो शान !………..”
एउटा टोल हिंडियो । पखेरो पारि पुग्ने काम भयो । एउटा डाँडो नाघियो । निष्पट्ट जङ्गल पनि छिचोलियो । बग्नास, आर्यभञ्ज्याङ्ग, चिदिपानी आदि आदि छाम्दै पल्लो घाँचमा घरी वनमा घरी चउर र फाँटमा अनि घरी उत्तरपश्चिम लमतन्न परेको सोते डाँडोमा अग्लिएर पुगियो । सबै ठाउँहरु चिन्छन् र पनि मौन र स्थिर छन् । त्यसरी नै लाटो बनेर गजधम्म परिरहेछन् तिनीहरु सबै । घरी हरियै हुन्छन् घरी लटरम्म पहेंलपुर घरी खाली रित्तो तर केही माग्दैनन् आफ्नै निष्तब्धता र शान्ति बाहेक ।
मनमनै सोचें – यिनै डाँडा–काँडा र पहाडबाट हामीले सिकिहाल्नुपर्छ: “जीवन मात्र बाँच्न र गल्ती गरिरहन होईन श्रेष्ठ बन्न र परिवर्तनशील बन्न पनि प्राप्त छ तर हरेक मानवले आफ्नो जगलाई कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन ।”
मुखमा घाम पर्‍यो । उकालो आयो । जीउभरी पसिनाको खोलो बग्यो । हरेक आङ् चिट्चिट् गरेर जिरिङ्ग हुन थाले जस्तो । कुनै ईन्जिन भए मर्मतमा लानुपर्ने तर मानवयन्त्रलाई त्यो प्रयोगशाला खै र ?
यस्तै यात्राहरुमा जात्रा देखाउँछ यो शरीर । के कानै भाउ खोजेको होला । जति घुर्काएपनि अहिले भर्खर त्यसले भनेको सुन्ने परिस्थिती छैन । अनवरत उकालिनु र तेर्सिनु अनि फेरि धेरै झर्नु छ । मन फेरि बुझ्न थाल्यो आफै।
छ महिनादेखि हिंडेको रे । “यो त थिरीथिरी भन्न पनि नपारि हिडेथ्यो” भन्नुहुन्थ्यो आमाले ठूलो नाक पारेर । हिंडेको घटाएर दौडेको मात्र नाप्ने हो भनेपनि ग्रिनकार्ड त दुई तीनवटै हुँदा हुन् । बिहान १० बजे अफिस पुगेर साँझ घर फर्किनेहरुका पनि गफ यिनै हुन् तर म व्यवहारिक परेंछु र यो कुरा घतलाग्दो भएको छ । यसरी नै बाटो नाप्न पाईरहें भने अरु केही चाहिएन बरु । यी पसिनाहरु खाडीको बालुवामा खन्याएर पैसामा जीवन बेच्नुभन्दा त यिनै उकाली ओरालीमा आफूलाई थोत्राउन बेस । एउटा अठोट हर्लक्क बढ्यो । यो माटो आफै उर्वर छ किन रगतले सिंचनु पर्‍यो हँ …..? जवाफ खोज्न हात्तीलेक पर्वत नियालें । उसका कमिले आँखाहरु पूर्वखोलाको सुँडमै व्यस्त रहेछन् । विचारहरु परेड खोलिरहे तर मेरो राष्ट्रवाद कहिल्यै मुर्झाएन झङ्गिईरह्यो बनमाराझैं । बरु बिरकोटको थुम्किलोले सान्त्वना दिदैं पिठ्यूँ थम्थमायो । तैपनि मन सन्तुलित बनेन । भावहरुले पुरानै शैलीमा रैँदालो मच्चाइरहे।
फुङ्ग उडेको परिवेश । चारैतिर छर्लङ्ग तर रित्तो । रातो माटो कोपरेर सडक बनाउन खोजे जस्तो मात्र । छेउकुनाबाट ओहोर दोहोर गर्न सकिने चाक्लै गोरेटो । अलिकति प्रगतिको छिर्को यता उछिट्टिएको हुनुपर्छ । यातायात, संचार, विद्युत आदि पक्षहरु उठाउन मैले छाडिसकें । ती कुनै कुरा पनि यी आदिम बस्तीसंग कुनै महत्व राख्न सक्दैनन् ।
यो रातोमाटो अभागि रहेछ । काल्लैपिच्छे उम्रेका जडिबुटि पाखाहरुमा त्यसै फालिएका अमृतजन्य वनौषधीहरु जम्मा पारेर रुखो बारीमा आगो लगाई एकपाथी अन्न बेचेर एक गोटी औषधी किनेर खानुपर्ने अवस्था अझै विद्यमान छ यो ठाउँमा । यस्तै ठाउँहरुको जमात त हो नि सम्पूर्ण देश । हामी धनी छौं तर भिकारी । आफूलाई कहिल्यै हेरेनौं हामीले । देशको अवस्था र व्यवहारिकता बिर्सेर एक्कासी यूरोप र अमेरिकाका मान्यताहरु लागु गर्न खाज्छौं । उक्त समुन्नतिको धारणा यो पखेरोमा आइपुग्दा प्रभावहीन भएर जान्छ । बारीमा हलो फालेर विदेशमा भेडा चराउन जानेलाई कदापि माटोले माफि दिने छैन । यी गाउँका पहिचान भनेकै हाम्रा टोल–टोलका मौलिकता, विशेषता र सामाजिकता हुन् । तर हामी तिनै आदर्शलाई लत्याएर आधुनिक बन्ने दौडमा झन् प्राचिनतम् बन्दैछौं । साँच्चै देश त राजधानीमा मात्र सिमित भएको छ । व्यवहारिक विकेन्द्रीकरण नगर्ने हो भने यो जैविक विविधतालाई थाती राखेर अनन्तसम्म पर्खिरहन विवस हुनेछन् हरेक गाउँहरु ।
“ए आम्मै दुहुनो छैन ?” गाउँको मुखैमा म बोलें ।
“छ बाबु, एउटा बकेर्नो । किन र ?”
माया पोखियो ।
“यसो मही खान पाए शीतल हुन्थ्यो कि ।”
“हिजोको बासी गोरश त छ क्यारे । आउ न बाबु पिंढीमा बस।”
बुढी आमैको आवाज सिरान घरकी कान्छी दिदीको जस्तो लाग्यो ।
सोचें, अत्यास मेटियो ।
एक गिलास मही, ठेको बसाएको एकै सासमा सिनित्त पारेर साइनो लगाएँ आफन्तको ।
“बाबु जोगिएर हिंड है ।” बिदा गरिन् बुढीले ।
मन कागती बन्यो । परिस्थितिले निचोरिहाल्यो । भित्रभित्रै तरर चुहें म ।
भनें – “हस्, ल बस्नुस् है ।”
वर्तमानले सबैलाई छुलिछुलि बनाएकाले म मात्र किन ओभानो रहन्थें र ।
दिन सुरु भएको मस्तै भएछ । एउटा छायाँसंगै आइसकेछ । नित्यकर्म भने बाँकि नै थियो । बाटो छेउको सजिवन भाँचेर सहयात्रीले मञ्जन र ब्रस एकैचोटी दियो । बेफुर्सदको कुटिलकोसा ठानी दाँत घोटें । बाटो ओसिलो पाखो हुँदै भञ्ज्याङ् ताकेको थियो । छेवैमा टोप्रे झारले बारीको डिल छोपेको देखें । तारे होटलको सबैभन्दा महँगो परिकार । एकमुठ्ठी लुछेर चमचम पार्दै उकालो नाप्न थालें । छुचो मन निबुवा र भगटे खोज्दै थियो ।
उकालो सकिएर शरीरलाई थुम्कोमा बिसाइदिएँ । मनभरीका भावका थुप्राहरु कुनै पहाडका शिलशिलाझैं परसम्म होचिंदै गईरहेका छन् । आँखाहरु वरिपरि चीलको दृष्टि सापट मागेर छामाछुम गर्दैछन् । स्मृतिले बाटो वरिपरि फूलको च्यादर बिछ्याउन खोजेपनि एकपछि अर्को घटनाले लखेटिरहेका छन् । अनुपम छटाले मेरोलागि स्वर्गीय आनन्द समर्पण गरेपनि मेरा आफ्नै थाती रहेका समस्याहरु घाँटिसम्म हिक्का छोडिरहेका छन् । म ती सबैलाई टुलुटुलु हेरेर आफैभित्र केही बस्तु हराए झैं झस्किरहेछु । यति हुँदा पनि परिस्थितीसंग आत्मसमर्पण गर्न विचारले घुँडा टेकिसकेको छैन बरु आत्म समालोचना शुरु भएको अनुभव बिस्तारै भैरहेको महशुस गरिरहेछु म ।
एउटा कल्पना– कुनै सुनसान घना जंगलको बीचमा उभिएको बाटो हराएको पथीक जस्तै आफ्नै यातनाशिविरमा भेटिरहेछु म आफूलाई । यस्तो अवस्थामा कुनै सृजना गर्ने कुरा त म सोच्नै सक्दिन । यातनाशिविरका मेरा पर्खालहरु – टाढा एउटा अग्लो महत्वकांक्षाको पर्खाल, त्यसभित्र क्रमैसंग होचिंदै गएका थुम्किलाहरुको नाम लिनुपर्दा : अध्ययन, जागिर, समाजसेवा, साहित्यसेवा आदि पर्छन् । अझै बितेर गएको त्यो नोस्टाल्जियाले मेरो अनेकौं क्षणहरुको संवेग समेटेर घोर यातना दिन तत्पर हुन्छ । साँच्चै मेरो यो नश्वर यी सबै प्रयोगहरुमा सामेल भएर कुनै भट्टीबाट प्रशोधन गरेर निकालिएको निख्खर धातु जस्तो भान परिरहेछ ।
सानो हुँदा दिन ढलेर सोत्राम भएको साँझमा पधेंरोमा सल्लाह गरेर मिर्मिरेमा जून चोरेर डाँडो काटेका बैंसालुहरुका कहानीहरु अहिले सम्झिरहेछु र यी डाँडाका खोचहरुमा ती जोडिहरु खोजिरहेछु । आजभोलि त यो परम्परा फेरिएर अर्कै रुप लिइसकेको छ । त्यस्तै साहित्यमा पनि लेखकहरुको भीडले सिर्जना प्रणालीलाई नै हलुङ्ग्याईदिएको छ । विविधताको प्रयोग हुनु त राम्रो हो तर साहित्यमा यथार्थता नभेटिनु ठूलो विडम्वना हो । साहित्य त यो धरातल जस्तै यथार्थ हुनुपर्छ बल्ल सुन्दर र आशलाग्दो स्वरुपको निर्माण हुनसक्छ । हरेक सिर्जनामा गुराँस फूलोस्, डाँफे र मयूर नाचोस्, हरिण टोलाओस्, पहेंलै बनेर तोरी फूलोस् त्यसैमा माहुरी भुन्भुनाओस् अनि छङ्छङ्गिएर पहाडी झरना झैं अमृतमय साहित्यिक रस बगिरहोस् । तर वर्तमान त यसरी गुज्रिरहेछ कि जे नहुनु थियो त्यहि भैरहेछ । यो धरातलसंग सोधेर जसले जीवनका परिभाषित भोगाई छाम्दै अतृप्त प्यासलाई निराशाका बिचमा आशाका रचनाहरु पस्किन सक्यो भने त्यो बल्ल भविष्यको श्रष्टा, द्रष्टा र कलम अनि विचारको मालिक हुनसक्छ ।
बिरकोट गाउँका केही टोलहरु छिचोल्दै अनवरत यात्रा पहाडका खोच र बारीभरी बिस्कुन भएका मनोकांक्षाहरु बटुल्न संभाबित समस्यासँग नारिदैं अघि बढिरहेको छ । नजरभरि हिमाल, पहाड र तराईको तस्विरहरु बिंम्वित भैरहेछन् । न रिल सकिन्छ न ब्याट्री । क्यामेरा उहि पुरानो ।
मन भित्रका संवादलाई ओत लगाउँदै यात्राको पुरानो साहित्यिक साथी पुनः नजिकियो ।
“सर, ऊ त्यो रामपुर फाँट, माथि स्याङ्जा, अलि परको थुम्को तनहुँ, पल्लो हुस्सुमुनि नवलपरासी र तल बगेको कालीगण्डकी ।” एकै सासमा बोल्यो ऊ । म पनि डाँडाकाँडा, जङ्गल, पखेरा र पहाडका सिरानहरुमा आँखा झिमिक्क नपारी नजरसंगै घरी उचालिएँ घरी पछारिएँ । प्राकृतिक सुरम्यतासंग मनका कोमल परिकल्पनाहरुलाई अंकमाल गर्दै दृष्टि रामपुरको उर्वर थालीमा लडीबुडी गर्न हौसियो । म हली बनें, बाउसे बनें, खेतालो बनें, दँदेरो बनें र क्षणभरमै भकारीभरि ऐश्वर्य चुलाएर गोबरले टालिदिएँ । बैशाख जेठमा बसन्तको आगमनसंगै भकारी फोरेर अनिकाललाई बिदाई गर्ने आँट अझै बज्र बनेर त्यसमाथि टाँस्सियो।
फेरि ऊ बोल्यो– “एउटै तस्विरमा टाउके हिमालदेखि तराईसम्म बिम्व उतार्न हाम्रो देशमा मात्र सम्भव हुन्छ रे । यो पाखोलाई चित्रमा उतार्ने हो भने पनि विश्वको कुनै मुल्यवान आकृति बन्थ्यो होला । सर, त्यसमा यो गाउँलेपन जीवन्त बन्यो भने त झन् अलौकिक नै हुँदो हो । कि कसो !”
भौंतारिएको उसको साहित्य चित्रकारको भूतमा परिणत भएछ । विचारें, उसलाई भिन्चीको मोनालिसा र अन्तिम भोज अनि पिकासोका चित्रहरुको बारेमा मात्र थाहा छ, तर भिसेन्ट म्यानगगको चित्रकारिता, बाँया कान काटेर प्रेमिकालाई उपहार दिनुपर्ने वाध्यता र ३६ वर्षकै उमेरमा आफै आत्महत्या गर्नुपर्नाको कारण थाहा रहेनछ । अहिले त ती चित्रहरु करोडौंमा लिलाम हुन्छन् तर तिनैले त्यो प्रसिद्ध श्रष्टालाई पुरै आयू बाँच्न सम्म दिएनन् । यो संसारमा प्रभाव पार्ने कुरालाई क्यान्भासमा उतार्न एकदमै गाह्रो हुन्छ ।
आकाशपाताल समेटेको उसको मनोकांक्षाको कदर गर्दै बल्ल मैले जवाफ दिएँ – “तस्विर त मनले खिचेर भावनामा रंग खन्याई दिनुपर्छ । आफ्नो अभिव्यक्तिबाट विम्व उतारेर यो ठाउँलाई सबैका आँखाभरि, छातिभरि, मष्तिष्कभरि र हृदयभरि घोलेर सुसज्जित किसिमले गाँसिदिनुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने चित्रकारिता र लेखन दुवैलाई लेखक र पाठकका परिकल्पनाहरुले अङ्कमाल गर्न सक्छन् ।”
“तर कसरी सर ?”
म खुशी भएँ । उ चित्रकारिता बिर्सेर लेखनमै तानियो तर जवाफ कसरी दिने ? उसका हरेक प्रश्नहरुले मलाई शिथिल बनाउँछन् । कता–कता एउटा उत्सुकता र जाँगर पनि भावनाको प्रचुरता संगै अबोध नारीको मुहार झैं सौम्य बनेर जानकारी लिन अनि दिन तत्पर भएको पाएँ । केही ढाडस मिलेजस्तो भयो ।
म बोलें – “हेर, यो गाउँ र पाखा नै हाम्रो पहिचान हो । हामी माटोलाई कदर गर्दैनौं तर त्यही माटोलाई कोदालो र हलोले मुसार्दा हातमुख जसरी जोडिन्छ त्यसरीनै यो स्वच्छ वातावरण र ऐश्वर्यको हावालाई शहरी प्रभावले बिटुलिन दिनु हुँदैन । जे छ यीनै पखेराहरुमा निहीत छ । मात्र पत्ता लगाउन सक्नु पर्दछ । हामी यस्तै विषयहरुमा गफिदैं नेटो छिचोल्दै थियौं ।
मैले थपें – “यी खोल्साहरुमा केही बगिरहेको छ भने त्यो पूर्खाहरुको रगत हो । यदि ती हरेक पात–पातमा शीतप्रभा बनेर टल्किरहेको छ भने ऊनै अग्रजहरुको पसिना हो । हाम्रो नामको पछि नेपाल झल्किएको छ भने तिनै पूर्वजहरुको बलिदान र उपलब्धि हो । हो हामीले त्यस्तै पृथक इतिहास कोर्नुपर्छ अब । यही माटोमा तन, मन, धन अपर्ण गर्न सक्यौं भने बल्ल त्यो ऐतिहासिक शिलालेख हाम्रो मेहनत र पसिनाले अझ गाढा, चम्किलो र स्वर्णिम बन्ने छ । अब कामना गरौं, उक्त शिलालेखमा रगतको बाछिटा कदापि नपरोस् ।” सहयात्री सुहाउँदिलो पाराले मुस्काए । हृदयको हाँसो परेला भिजाउन उत्सुक थियो । सोचें अब उसले पखेटा फड्कारोस् ।
यी पहाडी छटाको प्रतिविम्ब जब मेरो आँखामा ठोकिन्छ त्यसपछि हृदय रसाएर घाँटीमुनी ढक्क हुन्छ, वाक्य फुट्न सक्दैन र त म एकोहोरिन्छु । पीडाबोध र उल्लास एकैचोटी च्यूलिन्छ । मैले आफूलाई एक सर्को हेरेर उसलाई नियालें । हतास ऊ मबाट उछिट्टिएर प्रकृतिको रंगमञ्चमा नयाँ पाठहरु घोक्न थाल्यो ।
छर्लङ्ग उज्यालोमा म नौलो संसारमा उभिंदै थिएँ । यात्रा ताहुँका फुच्चे बजार र सडक बन्न आँटेका बाटोहरुमा आफ्नो तुनेलो गर्दै थियो। । अगाडि र पछि हिड्ने सहयात्रीहरु उमेर मिल्दा स्कूले किशोर किशोरी र अधवैंशेसँग मस्करी गरेको घरी सुन्थें घरी पुलुक्क हेर्थें म । पहाडका भित्ता, थुम्का, बाटोको छेउका घरहरु मनोहर प्राकृतिक बागमा चिटिक्क देखिन्थे । कतै खरको छानो, कतै कौसी र अटाली सहितको घर अझै कतै भने सटर तान्न पनि मिल्नेगरी बालुवा र सिमेन्ट जमाईएको आधुनिकता दर्शिदैं थियो । अरुले दुःखद पहाड भनेपनि मैले आफूलाई भोक र थकान बिर्सेर निक्कै खुशी महशुस गर्दै आँखा नबिसाई गोठ, आँगन, पिंढी र घरहरु नियाल्दै अघि बढिरहेको थिएँ । भेडा भेडासित बाख्रा बाख्रासित भने झैं म पूर्णरुपमा आफ्नोपनको महशुस गरिरहेको थिएँ । त्यहि मनहारी छटासँग आह्लादित भएर एउटा गजल फुर्यो, सँगै देशको मुहार पनि घुंक्क–घुंक्क रुंदो थियो ।
मेरै हिम आँगनीमा सरीसरी थाकेको छु ।
निराकारमा मेरै मुटु वरिपरी ताकेको छु ।।
फूलको साटो नील्काँडाले शान्ति हरी लगिदिंदा ।
घडा कलश सजाएर भरिभरि राखेको छु ।।
शान्ति हाम्री जानकी हुन् सीता अनि मन्दोदरी ।
सञ्जिवनी हिमशैलको छरी छरी ढाकेको छु ।।
छिट्टै आउ दिल बोकी एकलव्य र सुदामाको ।
माटो छोई लुम्बिनीको मरीमरी भाकेको छु ।।
शेरहरुलाई मनैमा थन्क्याएर गाउँलेसँग भलाकुसारी गर्नुपर्ने भयो । हजूरबुवा देखि भाइबहिनीहरु सम्म कसैसंग नमस्कार कसैसंग आर्शीवाद र कसैसंग दाहिने हातको लेनदेन गरेपछि अब पेटको पालो । कसैलाई खानको हतारो, कोही फोनमा झुम्म, कोही ताहुँ बजारको बसाहा मन्दिरमा जीऊ छोडेर लम्पसार, कोही धारोमा छ्याप्छुपमा तल्लीन थिए । त्यो अवस्था र मनोगत धारणालाई अ देखि ज्ञ सम्म सरसर्ती हेरेपछि त्यही साहित्यिक सहयात्री र अर्को एकजनासँग परामर्श गरेर बजारभन्दा माथिको रम्भापानी मन्दिर दर्शन गर्ने चाँजोपाँजो मिलाउन थाल्यौं ।
बुर्लुक्क बसाहा रहेको चौतारोमा उक्लेर धरा पाठगर्न थालें म नजरभरि अघाउन्जेल । पारिपट्टि ठिङ्ग उभिएको माथागढी र सँगै वरिपरिका प्राकृतिक उध्धानहरु दृष्टिको परिधिसम्म नियालेर रम्भापानीको डाँडोतर्फ उकालिएँ उनीहरुसँगै ।
नेपालको दार्जिलिङ भनेर चिनिने तानसेन र त्यसको आसपासका क्षेत्रहरु रिडी, मदनपोखरा, रानीघाट, बग्नास र ताहुँलाई पर्यटकीय गन्तब्य को रुपमा विकास गर्ने भनेर योजनाबद्ध शुरुवात भैसकेको रहेछ । ताहुँ इलाकाको नक्सा स्पष्ट हुनेगरि एउटा बोर्ड पनि टाँगिएको थियो । गाउँलेहरु अलिअलि भन्दै पनि थिए । उनीहरुको बयानले मलाई धर्मशास्त्रका पानाहरु स्मृतिमा पल्टाउन कर लगायो । गन्धर्व र मुसलमान बस्तीहरुको पाटो समेत ओकलेर एकीकरण अभियानमा त्यो स्थानको योगदानसँगै पौराणिक कथन त्यही सहयात्रीलाई सुनाएँ ।
इतिहासले त प्रष्ट्याएको छ । सत्य युग देखि नै मान्छेको अस्तित्व र विभिन्नखाले त्यस्तै युग गुजारेर अहिले कलियुग पूर्ण समुन्नतीमा बाँच्ने प्रयास गरिरहेको छ । प्रगतिको चरम खुड्किलो नाघेर मान्छेले पुरानो युगको चन्द्रमा छोई सक्यो, हिमाल टेकि सक्यो, अनेक युद्धहरु पनि जिति सक्यो मात्र बाकी छ आफ्नो अहमलाई उछिन्न ।
यसै प्रसंगमा त्रेता युगलाई माध्यम बनाएर बाल्मिकिद्वारा रचित रामायण साथै त्यो बेलाका कल्पित औपन्यासिक पात्रहरु र पुराणमा व्याख्या भएका कुराहरु पनि यी स्थानसंग सोझै सम्बन्ध राखेको पाईनु त्यो बेलाको काव्यात्मक कल्पना र अहिलेको सत्यताको बीचको विश्वासको पूल भन्न चाहन्छु म । एउटा बैदिक कालीन आदर्श समाज वा हाम्रो धर्मशास्त्रको रामराज्य हाम्रो हिन्दु परम्परामा जति मूल्यवान छ त्यसरी नै पश्चिमी धार्मिक परम्पराको पनि आफ्नै आदर्शराज्य UTOPIA नभएको हैन । बेदब्यास ले पनि सबै मानवीय चरित्रको व्याख्या गरेर धेरै पात्रहरु संयोजन गरि कृति तयार पारेका थिए भन्छु म जसलाई हामी महाभारत भन्छौं । महाभारतका केही ईश्वरीय चमत्कारहरु अहिले चेतनशील मानिसका अघि प्रायोगीक पनि भैसकेका छन् ।
अत्याचारी रावणको खेदो खनेपछि लङ्कामा विभिषणलाई राखेर मर्यादापुरुषोत्तम राम अयोध्या फर्के । आदर्श रामराज्यको मुख्य स्वरुप देखिनु बाँकी थियो । त्यस पछि अश्वमेध यज्ञ लगाएर तीर्थ ब्रत गर्न सीतालाई लिई धार्मिक कुण्डको भ्रमणमा निस्के उनी । कालीगण्डकी पनि एउटा पवित्र तीर्थको रुपमा परिचित थियो । हालको देवघाटमा यज्ञ सकेपछि सोहीबाटो चक्रतीर्थको स्नान गर्ने हेतुले राम र सीता हिंड्दै यही स्थानमा आइपुगेछन् । विश्राम गर्ने क्रममा सीतालाई प्यास लागेछ । वरिपरी खोजतलास गर्दा कतै पनि पानी नभेटिएकाले रामले बाणले हानि यसै स्थानबाट मूल फुटाएछन् । सीता लक्ष्मी स्वरुप हुने र लक्ष्मीको अर्को नाम रमा भनिएको, रमापानी भन्दा भन्दै रम्भापानी भएर यो पवित्र तीर्थको रुपमा स्थापित भएको साथै त्यो बेला जगाएको अखण्ड धुनी र अमृतमय जल सेचन गरेपछि अनन्य पुण्य मिल्छ भनेर पुराणमा व्याख्या गरिएको प्रसङ्ग टाक्क–टुक्क मिलाएर मैले सहयात्रीहरुलाई बताइदिएँ ।
धर्मशास्त्रले जेसुकै भनोस् तर त्यो स्थानको प्राकृतिक सुरम्यता र अनपेक्षित स्थानमा पानीको मुल हुनु मेरो लागी अनुसन्धेय लाग्यो । सबै बोटहरु उत्तर फर्केर बढेको हुनु सामान्य विज्ञानको लागि पनि अमान्य हो । ठूलो बेतको बोट, अखण्ड धुनी, मन्दिर, शिवलिङ्ग आदि कुराहरु एउटा भक्तलाई विश्वास दिलाउन पर्याप्त थिए । चोखो र सफा हृदयले मनमा कत्तिपनि पाप नराखिकन मागेको कुरा पाइएको जन विश्वास पनि आफ्नो ठाउँमा झाँङ्गिईरहेको थियो । तिर्थालुहरुले भाँडाभरी त्यहाँको पानी भरेर लाँदै थिए । त्यो पानीको सेवनपछि असाध्य रोग र मानसिक बिकारको पनि न्यूनिकरण हुन्छ भन्ने सुनेपछि हामी सबैले पेटभरी पानी पियौं । कसैले आफ्ना पानी खाने भाँडाहरु पनि भर्दै थिए ।
धेरै बेरपछि मेरो जिज्ञासु नजिक आएर केही बुझ्न खोज्यो । म आफै त्यो परिवेशसंग अनभिज्ञ थिएँ तथापि रामको व्यक्तित्व र कीर्तिको बारेमा केही भन्नै कर लाग्यो । उसको सिर्जनसिलतामा ठेस नपुगोस् भनेर मैले सकेसम्म ऊ भित्रको मानवलाई झक्झक्याउन तम्सिरहेँ ।
राम र सीता यहाँ आइपुगेर पानी पिईसकेपछि साँझ परेकाले यतै बस्ने विचार भएछ । यसको आडैमा केही पर अंगीरा ऋषिले तप गर्दा रहेछन् । सीताले रामलाई छलेर केही समय उनै ऋषिको आसपासको अर्को गुफामा लुकिछन् । त्यस गुफालाई सीतागुफा भन्दा भन्दै हाल सिद्धगुफा भन्न थालिएको र त्यो गुफा अहिले पनि सिद्धार्थ राजमार्गको रामदीघाट नेर भेटिएकोले यो कथन र सत्यताको बीचमा प्रमाणिक आधार कति छ थाहा भएन ।
त्यसको भोलिपल्ट उनीहरु रिडीतिर लागेछन् । त्यहाँ एउटा राक्षसले झन्डै १६ हजार युवतीहरुलाई एउटा गुफामा थुनेर राखेको रहेछ । १६ हजार पुगेपछि एकैचोटी भोग गर्ने सुरसार कसेको यौन पिपाशु राक्षसलाई बध गरी श्रीरामले ती सबै कन्याहरुको उद्धार गरेछन् । आफ्नो जीवनको रक्षा गरेकोले सबै कन्याहरुले रामलाई बरको रुपमा पाउने इच्छा गरेछन् । बिवाहित भइसकेकाले अर्को जन्ममा ईच्छित मनोकांक्षा पूरा गरिदिउँला भनेको कारण द्धापर युगमा कृष्ण र राधिका साथै ग्वालिनिको प्रसङ्ग जोडेर कल्पनामा यथार्थता मिसाउने प्रयास गरिएको कुरा बताएपछि सबै साथीहरु मुखभरि पानी बनाएर मबाट अझै धेरै सुन्ने इच्छा व्यक्त गरे ।
मेरो साहित्यिक साथीको पनि सुन्ने तलतल अझै बाँकी रहेछ ।
त्यसपछि मैले देवघाटमा सीता अग्निमा प्रवेश गर्दा रामले फेला पार्न भ्याएको कपाल पहाडको कापमा अझै उम्रिने र वर्तमान भारतको गडवाल श्रीनगर अन्तर्गत कमलेश्वर मन्दिरको महिमाको बारेमा बताईदिएँ । जस अनुसार रामले शिवजीलाई चढाउन केही कमलका फूलहरु लिएर गएछन् । शिवजीले एउटा फूल लुकाईदिनु भएछ । पछि चढाउने बेला एउटा फूल नपुगेपछि रामले आफ्नो आँखा झिकेर चढाउन खोज्दा शिवजीले रोकी रामलाई कमलनयन नाम राखिदिएको कथन आफू दार्जिलिङ घुम्न जाँदा सुनेको भनी प्रसङ्गलाई त्यही धरातलमा तान्न म तम्सिएँ ।
यात्रा पनि टुङ्गोमा पुगेको र पूजा पनि भैसकेकाले आस्तिक र नास्तिक सबैले त्यो जंगलको मन्दिर परिसरमा आ–आफ्ना खानेकुराहरु खान थाले । मलाई त्यो पानीमा खलमल नुहाउन मन थियो । त्यो अवसर मिलेपनि मैले साहस गरिन । हातमुख राम्रोसँग धोएर टाउको केहीबेर भिजाईरहें ।
जीवन, मृत्यु र अमृतत्व सँगै मनमा केही शान्तिको महशुस भएको हो वा मेरो जडता उही पारामा रहिरहेको हो एकीन गर्न सकिन । शिवलिङ्गमा जल चढाएर मनमनै भनें – “लौ भगवान्, सत्कर्म गर्ने अवसर देऊ !”
२०६१ सालको पौषको पहारिलो घामले पनि जङ्गलको शीतलतामा हार खाएर ओरालो झर्दै थियो । आफ्नो पेटपूजाको लागि आफै जुट्दै थिएँ म । सबै परिकार मिसमास पारेर मेरो अनुयायी पहिला मलाई खुवाएर मात्र आफू खाने सुरमा आडैमा थचक्क बस्यो । साँझसम्म बिहानदेखि हिंडेर आएको बाटोको ऋण एक–एक पाइला गरेर चुक्ता गरी पुरानै भकारोमा भित्रिनु थियो ।
उसले पुनः साहित्य कोट्याउने मौका खोज्दै थियो । मेरो चित्तले उसको पित्त निचोरेपछि त्यही मूलको मीठो पानी र हाम्रो सामलको ओईरो मुखमा हाल्दै बहस गर्न थाल्यौं । “साँच्ची सर, नपत्याउने ठाउँमा पनि यो कस्तो मनमोहक स्थान रहेछ तर ….।” ऊ रोकियो ।
“हेर, यो त के हो र ! हाम्रो देशमा हरेक टोल जङ्गल र पाखा–पाखामा धेरै संभावनाका खजानाहरु छन् तर हामीलाई श्रीखण्ड पनि खुर्पेटाको बिंड भएको छ । साँच्चै यो देशमा अनेकन प्राकृतिक सौन्दर्यका मोतीहरु छन् जसलाई हामीले धागोमा उनिदियौं भनेपनि समुन्नतीले सगर छिचोल्नेछ । हाम्रो धार्मिकता अझै मुल्यवान छ , ऐतिहासिकताको त कुरै नगरौं । यही हेर न यो सुरम्यता पनि आफ्नै ठाउँमा कसरी डटिरहेको छ । फरक यत्ति हो हामीले यीनको पहिचान र संरक्षण गर्न सकिरहेका छैनौं ।”
“सर, हामी के गर्न सक्छौं त यसको लागि ? के म …….।”
उसका उत्सुक आँखा र राष्ट्रको समुन्नतिको लागि दर्शिएको आहुतिलाई मैले हृदयदेखिनै उच्च आदर प्रदान गरें ।
नीलो आकास, विविध वनस्पती र जङ्गली पशुपंक्षीहरु संगै यो अपत्यारिलो अझै अद्धितीय भू–बनोटबाट निस्किएको अमृतजल समेटेको चित्ताकर्षक डाँडोलाई सबैको सामु उभ्याएर आन्तरिक र बाह्य पर्यटन बिस्तार गर्न सकियो भने बल्ल आशिष मिल्नेछ । जसले जहाँबाट जे गर्न सक्छ उसले त्यहीबाट अहिल्यै यस्ता स्थानहरुको सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र धार्मिक पर्यटनको अवधारणा विकास गरि भू–दृष्य उत्खनन् गरिएको आन्तरीक आकर्षणको सन्देश जताततै पुर्‍याएर मात्र हामीले ईश्वर प्राप्तीका लागी नश्वर देहको वास्तबिक उपयोग गर्न सक्नेछौं ।
उसले आत्मिक पारामा मसंग सल्लाह माग्यो – “सर मैले यो पावन भूमीमा एउटा शुरुवात गर्न चाहन्छु तर हजुरले सहयोग गर्नुपर्छ।”
म दंग पर्दै “भैहाल्छ नि” भनिदिएँ । ऊ जुरुक्क उठेर मुलतर्फ हानियो । म आफ्नो घट्ट चलाउँदै थिएँ ।
एकैछिनमा एउटा ठूलो जलुकाको पात लिएर ऊ मेरो सामु आइपुग्यो । म अझै रल्लिएँ ।
“सर म यो पवित्रभूमी, प्रकृति र हजूरलाई साँक्षी राखेर आजबाट साहित्य यात्रामा लाग्छु ।” त्यही पानीले औलाका साहाराले उसले लेख्यो–“सिर्जना म तिमीलाई जीवनभर ममता दिइरहनेछु ।”
“ल बधाई छ तिमीलाई मेरो, राम्रो शुरुआत गर्यौ । म एकदमै खुशी छु ।”………… ऊ मुसुक्क हाँस्यो । ठूलो युद्ध जितेको सिपाही झैं मलाई हेर्दै खाजा बुक्याउन थाल्यो ।
मनमनै भगवानसंग पुकारें ! अब आँखा चिम्लेर बसेकालाई दृष्टिमा समुन्नती, दिमागमा विकास र हृदयमा संरक्षणको ममता जगाउने खुराकहरु हरेक शब्द–शब्द र आक्षरिक भावमा झल्कियोस् । सर्जकका आकांक्षाहरुमा प्रतिवद्धता र नवीन ईच्छाशक्तिको बीजारोपण हुन सकोस् । इतिहासमा फर्केर दुःख मान्नुपरे पनि वर्तमान र आगतमा निर्धक्क भएर लम्किने स्वच्छ वातावरणको निर्माण होस् उसको विचारको मझेरीबाट । अझै हलो अड्काएर गोरु पिट्दै बाँदरको रोग कुकुरमा सार्ने कोठे साहित्यिक परम्पराको नाकमा खुर्सानी ठोस्न उसका सिर्जनाहरु सवल बनून् । ईश्वरीय शक्ति भन्दा पनि यो अलौकिक प्राकृतिक सम्पदाले उसलाई अझै उर्जा प्रदान गरोस् । जसरी पृथ्वीको गर्भ छिचोलेर रम्भापानीको मूल फूटिरहेको छ त्यसरी नै उसको साहित्यले पनि साहित्यिक संभावनाको खोजको गहिराईमा पुगेर असल सोचको बीजारोपणको साथमा वर्तमान यथार्थतालाई वर्णन गरेर आफ्नो सिर्जनशील तत्वको विशिष्ट चित्र पस्किन सकोस् । उसको सक्षम लेखनयात्राको लागि मुरी–मुरी शुभकामना ।
यो पवित्र कुण्डलाई हिजो कसैले बिर्सेनन्, आजका धेरैले चिन्दैनन् तर भोलि सबैले ऐतिहासिक दसीको धरोहरको रुपमा लिनेछन्, धाइरहनेछन्, सम्झिरहनेछन् ।
मैले सन्तुष्टिको साथमा पिएको पानी घाँटी छुँदै हृदयको बाटो आमसयतर्फ ओरालो लाग्यो । पुलुक्क उसलाई हेरें । उसले पिइरह्यो – घट् घट् घट् ….. ।
२०६१ माघे संक्रान्ति